बार्सिलोना डी लिग्ट नजानुको कारण बाहिरियो
एजेन्सी । डी लिग्ट युभेन्ट्समा सार्वजनिक हुने मिति समेत तय भइसकेको छ !!विभिन्न क्लबसंगै बार्सिलोनाले समेत उनलाई क्लबमा अनुबन्ध गर्न दौड लगाएको थियो तर डच क्लब आयाक्सका कप्तान डी लिग्ट लागे, युभेन्टसमा ।
डी लिग्उट अन्तत ६७.५ मिलियन पाउण्डमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो रहेको टिम युभेन्टस प्रस्थान गरेका हुन् । उनले राम्रो साथ् खोजे या राम्रो पारिश्रमिक आखिर युभेन्ट्स नै किन ? बार्सिलोना जान किन अस्विकार गरे उनले यस्तो छ ३ कारण ?
१) तलब । उनका एजेन्ट मिनो रइओलाले बार्सिलोनासँग सम्झौताको लागि प्रत्येक वर्ष डी लिग्टलाई १२ मिलियन युरो दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर बार्सिलोनाले यति ठूलो राशिमा भित्र्याउन मानेन ।
२) क्लबमा पर्‍याप्त सेन्टर–ब्याक । बार्सिलोनामा अहिले जिरार्ड पिके, क्लेमेन्ट लिनग्लेट, स्यामुएल उमटिटी र जियान क्लेइर टोडिबो रहेका छन् ।
३) बार्सिलोना आएको भए डी लिग्टले यी खेलाडीसँग प्लेइङ इलाभेनमा पर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु पथ्र्यो । यस्तो अवस्थामा उनले मौका कप पाउने थिए भने अनुभवी खेलाडीको छायामा उनी पर्न सक्थे ।
४) बार्सिलोना अझै स्ट्राइकर लाइनलाई बलियो बनाउन चाहिरहेको थियो । उसको नजरमा एन्टोनी ग्रिजम्यानदेखि नेयमारसम्म थियो । अन्ततः यसै साता ग्रिजम्यानलाई बार्सिलोनाले ठूलो रकममा भित्र्यायो । बार्सिलोनाको ठूलो खेलाडीमा नजर जादा डी लिग्टलाई भित्र्याउने प्रक्रिया भने अगाडि बढेन र अर्को कारण थियो युभेन्टसको दृढता ।
डी लिग्ट टुरिन पुगे पश्चात आफु त्यहा खुशी रहेको समेत बताएका छन् ।